Semalt विशेषज्ञ: किन तपाईं स्वचालित स्थानीय Scraper मा लगानी गर्नु पर्छ
वेब scrapers पीडित को माध्यम बाट जाने को लागी आफ्नो इच्छित डाटा को लागी। स्वाभाविक रूपमा, एक मेहनती वेब स्क्रेपरले डाटाबेसबाट म्यानुअल रूपमा अनगिन्ती घण्टा स्क्र्याप गर्ने जानकारी खर्च गर्दछ, त्यसपछि प्रतिलिपि गरेर टाँस्नुहोस्। यो वास्तवमै मस्तिष्कमा पानी भइरहेको छ, तर, दिनको अन्त्यमा, त्यहाँ भएको सबै कामका लागि देखाउनको लागि कसैलाई थोरै वा केही सफलता हुँदैन। त्यो तर्फ, त्यहाँ एक शुभ समाचार छ। स्थानीय स्क्रैपर्सका प्राविधिक विशेषज्ञहरूलाई धन्यवाद, जसले प्रोग्रामहरू विकसित गर्न काम गर्छन् जुन समय र पैसा कम गर्न सेट गरिएको हुन्छ जुन वेब स्क्र्रापर्सहरूले डाटामा पहुँच पाउनको लागि राख्छन्। यो सबै एक बटनको प्रेस मा।
कसरी स्थानीय scrapers काम गर्दछ? म वर्णन गर्छु, स्थानीय स्क्रेपरले तपाइँलाई तपाइँको वेबसाइटको लागि डाटाबेस निर्माण गर्न मद्दत गर्न कटिबद्ध छ, डाटाबेस डाइरेक्टरी डेटा प्रयोग गरेर सम्भावित ग्राहकहरूको खोजी गर्न र फिर्ता मद्दतमा, तपाइँ एक सफल मेलि campaign अभियानको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, जुन तपाइँलाई नाफा दिनको लागि सेट गरिएको छ। धेरै राम्रो लाग्यो? ठीक छ, त्यो सबै होइन, स्थानीय स्क्र्यापरमा तपाईं ग्यारेन्टी हुनुहुन्छ सफलता। यो उनीहरूको रणनीतिको कारणले हो जुन हो, तपाईले आफ्नो लक्षित कोठाबाट डाटा हटाउनु हुन्छ। भन्नुहोस् तपाइँ एक छाला लाईइटनिंग मेडिकल डाक्टर हुनुहुन्छ र तपाइँ त्यस ठाउँबाट ग्राहकहरूलाई लक्षित गर्न चाहानुहुन्छ। स्थानीय स्क्रेपरले तपाईंलाई सयौं र तपाईंको सम्भावित ग्राहकहरूको पूर्ण सम्पर्कको हजारौं हुन अनुमति दिन्छ। त्यो हो उनीहरूको फोन नम्बरहरू, ईमेल ठेगानाहरू, वेबसाइटहरू र तिनीहरूको वेबसाइटहरूको समिक्षा।
स्थानीय स्क्रेपर कुनै जटिल प्रयोगकर्ता इन्टरफेस वा जटिल प्रोग्रामिंगको साथ प्रयोग गर्न सहज छ। वास्तवमा, उनीहरूसँग भिडियो ट्यूटोरियलहरू छन् जुन अड्किँदा तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छ। स्थानीय स्क्रेपरको बारेमा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि यसले तपाईंलाई तपाईंको पैसाको मूल्य दिन्छ। यो सस्तो छ, एक समय खरीदको साथ र कुनै गोप्य लागतमा।
केहि समय पहिले, कस्टम स्क्र्यापर बनाउने थकाउला र महँगो थियो। एक वेब स्क्रेपरले टेक्स्ट विशेषज्ञको सहायता लिनु पर्दछ उसलाई कस्टम स्क्र्यापर बनाउनको लागि। बदलामा, विशेषज्ञले केही हास्यास्पद रूपमा उच्च घन्टा दरको लागि सोधेको थियो। हुनसक्छ अर्को वेब स्क्रेपरले डाटा खनन कम्पनीबाट केहि पुरानो अवस्थित डाटाबेस खरीद गर्न बाध्य पारिएको थियो। यो एक धेरै उच्च मूल्य मा आउँछ र अझै प्रभावी छैन किनकि यसले पुरानो जानकारी समावेश गर्दछ। स्थानीय स्क्र्यापरले स्क्र्यापरहरूलाई यी सबै दुखाइबाट बचाउँदछ जुन तपाईंलाई तपाईंको स्वचालित स्क्र्यापिंग बट्सहरूमा पूर्ण नियन्त्रणमा राख्दछ। स्वचालित बोटहरू सबै उद्देश्यका हुन् र कहिँ पनि र जहाँ पनि स्वचालित रूपमा काम गर्न सक्दछन्।
स्थानीय खुरचुराहरूले वेब स्क्र्यापि field फिल्डमा-बर्ष सफलताको रेकर्डको गर्व गर्दछ। स्क्र्यापर विश्वका सबैभन्दा ठूला डाटाबेस वेबसाइटहरू data बाट डाटा स्क्र्याप गर्न स्वचालित हुन्छ: बिंग नक्शा, गुगल नक्सा, याहू स्थानीय, येलप, यलो पेज, अष्ट्रेलिया, यलो पेज क्यानाडा र येलो पेज न्युजील्याण्ड।
स्थानीय स्क्रेपरमा, तिनीहरू बुझ्दछन् कि प्रत्येक वेबसाइट सूचीकरण भिन्न छ, डाटा र व्यवसाय देखाइएको डाटाको बारेमा। त्यस कारणका लागि, स्थानीय स्क्र्यापर एक वेबसाइटबाट अधिक जानकारी को स्क्र्याप गर्नको लागि डिजाइन गरिएको हो। यसैले, तपाई डाटा को मात्र सीमित छैन जुन तपाई स्क्र्याप गर्न सक्नुहुनेछ।
स्थानीय स्क्र्यापरमा, तिनीहरूले तपाईंलाई उत्तम अनुभव दिन सक्दछन् जब वेब स्क्र्यापिंग गर्दा तपाईंको समय र पैसाको थोरै लगानी गर्दछ र अझै तपाईंको पैसाको मूल्य प्राप्त गर्दछ।